FITSARAM-BAHOAKA : Olona 14 no maty hatramin’ny fiandohan’ny taona | NewsMada
Tsy fahatokisana intsony ny fitsarana no mahatonga ny fitsaram-bahoaka.
Tsy mety mijanona, miha-mahery vaika hatrany ny fitsaram-bahoaka eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Araka isa voaangona, 14 izay no isan’ny olona matin’ny fitsaram-bahoaka teto Madagasikara nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona 2017. Miha-mahazo vahana hatrany araka izany ity tranga ity amin’izao fotoana…
39 andro izay no lasa tamin’ity taona 2017 ity, hatreto anefa, 14 izay no isan’ireo matin’ny fitsaram-bahoaka ary tsy tamin’ny faritra iray fa saika nisy isam-paritra teto Madagasikara. Araka izany, miha-mahazo vahana hatrany ity tranga iray ity amin’izao fotoana izao ary mbola tsy nisy hatreto fandraisana fepetra na fanapahan-kevitra nataon’ny teo anivon’ny fitondram-panjakana indrindra fa ny minisiteran’ny fitsarana.
Raha tsiahivina, efa maro ireo fikambanana iraisam-pirenena misahana ny zon’olombelona nisintona lakolosy fanairana mikasika ity raharaha ity saingy hodian’ny fitondram-panjakana tsy heno izany. « Arakaraky ny fahazahoan’ity tranga ity vahana no mampahazo vahana ihany koa ny tsy fahatokisan’ny olona ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Raha toa ka tsy tafaverina ao anatin’ny fotoana haingana izany fitokisana izany dia tsy ho foana mihitsy io fanaovana fitsaram-bahoaka io fa mbola hitohy ary vao maika aza hihamaro. Any amin’ny fitondrana foibe ihany, indrindra fa ny minisitera no vahaolana afaka manafoana ity tranga ity », hoy ny nambaran’ny mpahay lalàna iray.
Ny tena mampatahotra ao anatin’ity raharaha ity, hoy ihany io mpahay lalàna io, dia ny fidiran’ny fanaovana fitsaram-bahoaka aty amin’ny faritra an-drenivohitra. « Raha izao tranga misy amin’izao fotoana izao io dia mbola azo sorohana tsara. Ny tena olana misy mantsy dia ny tsy fahafataran’ny olona hoe : inona no asan’ny fitsarana ? inona no asan’ny zandary na polisy ? inona no ilavana ny fonja ? Noho ny fahasarotana misy eo amin’ireo sehatra ireo, izay tsy fantatry ny ankamaroan’ny olona akory ny tena asany, dia izao no zava-mitranga. Anjaran’ny minisiteran’ny fitsarana miaraka amin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny mpitandro filaminana anefa no manao izay asa fampahafantarana izay », hoy ihany izy.
Hatreto anefa, tsy mbola heno na hita ny fandraisana fepetra nataon’ny teo anivon’ny minisiteran’ny fitsarana manoloana ity tranga miha-mahazo vahana eto Madagasikara ity. Averina foana anefa fa tany tan-dalàna i Madagasikara ary tokony hanaja izany lalàna izany avokoa ny tsirairay.